K ज्ञात फाइब्रोमायाल्जिया ट्रिगरहरू [यी कारणहरूले पीडा बढाउन सक्छ]
7 ज्ञात फिब्रोमायाल्जिया ट्रिगरहरू
10 / 03 / 2019 /1 टिप्पणी/i Fibromyalgia/av भोंड्ट
7 ज्ञात फाइब्रोमायाल्जिया ट्रिगरहरू: यसले तपाईंको लक्षण र पीडा बढाउन सक्छ
फाइब्रोमायाल्जिया फ्लेअर्स भनेको पिरेड्सको नाम हो जब तपाईंको पीडा अचानक बढ्दो हुन्छ। यी बढ्दो अवधिहरू अक्सर तथाकथित द्वारा सुरु गरिन्छ ट्रिगरहरू.
यहाँ तपाईं सात सम्भावित कारणहरू र सुरू गर्न सक्ने ट्रिगरहरूको बारेमा बढी सिक्नुहुनेछ फाइब्रोमायाल्जिया फ्लेरस र तपाइँका लक्षणहरूलाई बढावा दिनुहोस्।
- Fibromyalgia एक जटिल निदान हो
Fibromyalgia दैनिक जीवन र जीवनको गुणस्तर भन्दा धेरै टाढा जान सक्छ - फ्लेयर बिना पनि। तर जब एक उत्तेजित एपिसोड शुरू हुन्छ, यी लक्षणहरू र पीडा रातभरि लगभग डबल हुन सक्छ। धेरै राम्रो छैन। यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले आफ्नो सम्भावित ट्रिगरहरूको बारेमा बढि जान्नुहोस् - र तिनीहरूलाई रोक्न तपाईंले के गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुराको होईन। हामी दुबै पुरानो दुखाई निदान र रोग भएका बिरामीहरूको लागि उपचार र परीक्षणको लागि अझ राम्रो अवसरहरू लड्छौं - दुर्भाग्यवस सबैजना यस कुरामा सहमत छैनन्।। लेख साझा गर्नुहोस्, हाम्रो FB पृष्ठमा हामीलाई मनपराउनुहोस् og हाम्रो YouTube च्यानल सामाजिक मिडियामा दीर्घकालीन पीडा भएकाहरूका लागि राम्रो दैनिक जीवनको लागि हामीसँग लड्न हामीसँग सामेल हुन।
यो लेख सात सामान्य ट्रिगरहरू र fibromyalgia दुखाइको कारणहरू र तपाईंको लक्षणहरू खराब हुँदै जान्छ - ती मध्ये केही तपाईं आश्चर्य हुन सक्छ। लेखको फेदमा तपाइँ अन्य पाठकहरूको टिप्पणीहरू पढ्न र राम्रो सुझावहरू लिन सक्नुहुन्छ।
१ भावनात्मक र शारीरिक तनाव
सायद कम से कम आश्चर्यजनक ट्रिगरहरू मध्ये एक हो र fibromyalgia लक्षणहरू बिग्रने कारणहरू। तनाव धेरै रूप र आकारहरूमा आउँछ - भावनात्मक चुनौतीहरू, मानसिक एपिसोडहरू र शारीरिक तनावबाट सबै कुरा। हामीलाई यो पनि थाहा छ कि फाइब्रोमाइल्जियासँग हामीसँग हाइपरसेन्सिटिभ स्नायु प्रणाली छ जुन यस्तो तनावमा थप कडा प्रतिक्रिया गर्दछ।
सामान्य तनावका कारणहरू जुन एक फाइब्रोमाइल्जिया फ्लेयर-अप ट्रिगर गर्न सक्दछ:
भावनात्मक समस्याहरु (कम आत्मसम्मान, चिन्ता र उदासीनता)
नयाँ निवासमा पुनर्वास
हामीसँग अधिक फाइब्रोमाइल्जिया छ स्नायु हल्ला (फाइब्रोटिक कोहरेको एक कारण) अरू भन्दा। यसको मतलब यो छ कि हाम्रो शरीरमा धेरै विद्युतीय स have्केतहरू छन् र हामीसँग हाम्रो दिमागमा केही भिस्ने संयन्त्रहरूको अभाव छ। वैज्ञानिकहरू विश्वास गर्छन् कि यो अतिसंवेदनशीलतालाई राम्रोसँग बुझेर कसैले उपचार पत्ता लगाउन सक्छ। योग, स्ट्रेचिंग र आन्दोलन अभ्यास मानसिक र शारीरिक तनावबाट छुटकारा पाउन राम्रो तरिका हुन सक्छ - प्राथमिकतामा सुत्नु भन्दा पहिले। तलको लेखमा तपाईले एक प्रशिक्षण कार्यक्रम देख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँले पाँच शान्त अभ्यास देखाउनुहुन्छ।
थप पढ्नुहोस्: - ib व्यायाम व्यायाम व्यायाम Fibromyalgia साथ जो को लागी
यी आन्दोलन अभ्यासहरू बारे थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् - वा तलको भिडियो हेर्नुहोस् (भिडियो)।
सुझाव: तनाव-सम्बन्धित एक्सेर्बेशन विरुद्ध आराम उपायहरू
राम्रो सल्लाह: - आरामको लागि एक्यूप्रेसर चटाई प्रयोग गर्नुहोस्
हाम्रा धेरै बिरामीहरूले हामीलाई उनीहरूको दुखाइको स्थितिमा राम्रो नियन्त्रण गर्न सक्ने तरिकाहरूबारे सोध्छन्। फाइब्रोमायल्जिया रोगीहरूका लागि, हामी प्रायः विश्राम उपायहरूमा जोड दिन्छौं - जस्तै प्रयोग एक्युप्रेशर चटाई (यसको बारेमा थप पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् - लिङ्क नयाँ रिडर विन्डोमा खुल्छ)। हामी नियमित प्रयोगको सिफारिस गर्छौं, र यदि तपाइँ यसबाट लाभ उठाउनु भएको छ भने प्राथमिकता दिनहुँ। तपाईं चटाई प्रयोग गर्न बानी परेपछि, तपाईं त्यसमा सुत्ने अवधि पनि बढाउन सक्नुहुन्छ।
पुरानो र बाथ दुखाइको लागि अन्य सिफारिस गरिएका आत्म-उपायहरू
आर्निका क्रीम वा तातो कन्डिसनर (कसैलाई लाग्छ कि यसले केहि दुखाइ कम गर्न सक्छ)
शान्त र नियन्त्रित कपडा र व्यायाम अभ्यासले तपाइँको शरीरमा शारीरिक र मानसिक तनाव कम गर्न मद्दत गर्दछ। तलको भिडियोमा तपाईले पाँचवटा व्यायामसहितको व्यायाम कार्यक्रम देख्न सक्नुहुन्छ जुन तपाइँलाई तनाव कम गर्न मद्दत गर्दछ।
हाम्रो परिवारमा शामिल हुनुहोस् र हाम्रो युट्यूब च्यानलको सदस्यता लिनुहोस् (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्) नि: शुल्क व्यायाम सल्लाहहरू, व्यायाम कार्यक्रमहरू र स्वास्थ्य ज्ञानको लागि। स्वागत छ!
२ गरिब निद्रा
फाइब्रोमायल्जिया भएका हामी प्रायः खराब निद्रा र कम निद्राको गुणस्तरबाट ग्रस्त हुन्छौं। अन्य चीजहरू मध्ये, यसको मतलब यो हो कि हामी प्रायः बिहान उठ्छौं र शरीरमा थकान महसुस गर्छौं। फाइब्रोमायाल्जियाले गहिरो निन्द्रालाई रोक्छ र हामीलाई सुत्‍न सजिलो अवस्थामा राख्छ (जब हामी निद्रामा जान्छौं)।
यससँगको समस्या यो छ कि निद्रा भनेको शरीरको प्रशोधन र मानसिक र भावनात्मक तनावलाई कम गर्ने तरिका हो। जब हामी सुत्छौं, दिमागले भाँडा माझ्छ र हाम्रा सबै अनुभवहरू र भावनात्मक प्रभावहरू खाली गर्दछ। निद्राको गुणस्तरको अभाव यस प्रक्रिया भन्दा पर जान्छ - जसले फलस्वरूप फाइब्रोमाइल्जिया पीडालाई बिगार्न योगदान पुर्‍याउन सक्छ।
धेरै व्यक्तिहरू पुरानो पीडा र बिमारीहरूले ग्रस्त छन् जसले दैनिक जीवनलाई नष्ट गर्दछ - यसैले हामी तपाईंलाई प्रोत्साहित गर्दछौं सामाजिक मिडियामा यो लेख साझा गर्नुहोस्, हाम्रो फेसबुक पेज मन नहिचकिचाउनुहोस् og YouTube च्यानल (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्) र भन्नुहोस्, "हो, लामो दर्दको निदानको बारेमा थप अनुसन्धान गर्न"।
यस तरिकाले, कसैले यो निदानसँग सम्बन्धित लक्षणहरूलाई थप देख्न सक्ने बनाउन र अधिक व्यक्तिहरूलाई गम्भीरतासाथ लिएको निश्चित गर्न सकिन्छ - र यसरी उनीहरूलाई आवश्यक मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्। हामी यो पनि आशा गर्दछौं कि यस्तो बढाइएको ध्यानले नयाँ आकलन र उपचार विधिहरूमा अनुसन्धानका लागि बढी रकम प्राप्त गर्न सक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: बिहान Fibromyalgia र दुखाइ: के तपाईं गरीब निन्द्राबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ?
यहाँ तपाईं फाइब्रोमाइल्जियाका साथ प्राय: पाँच बिहान लक्षणहरू पढ्न सक्नुहुन्छ।
Weather. मौसम परिवर्तन र तापमान संवेदनशीलता
मौसम परिवर्तन हुँदा रूमेटोलॉजिष्टहरूले बिग्रेको लक्षणहरूको अनुभव गर्ने कुनै मिथक छैन - यो तथ्य हो जुन अनुसन्धानमा समर्थित छ।(1). विशेष गरी, बढ्दो लक्षणहरू ट्रिगर गर्दा ब्यारोमेट्रिक दबाव (वायु दबाव) निर्णायक थियो। धेरैले सूर्य र तातो मौसममा पनि राम्रो प्रतिक्रिया दिन्छन्।
एक स्थिर मौसम नरम टिश्यु गठिया (फाइब्रोमाइल्जिया) को साथ यसरी हाम्रो लागि राम्रो हो। तर हाम्रो प्रिय नर्वेमा, यो त्यस्तो स्थिति हो जुन हामीसँग एकदम स्पष्ट मौसम seतुहरू छन् र त्यसकारण कहिलेकाँही प्रमुख मौसम परिवर्तनहरू - जसले थप लक्षणहरू र फाइब्रोमाइल्जिया दुखाइको रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
यो अक्सर विशेष गरी घाम र गन्धको खराबी र यो मौसम परिवर्तन मा रुमेटीक काँध मा एक बिग्रिएको बारेमा रिपोर्ट छ। जुन, अन्य चीजहरूको माझमा, हामी कल गर्ने कुरातर्फ डो .्याउँछ तनाव घाँटी. तपाईं यो निदानको बारेमा अतिथि लेखमा रोहोल्ट चिरोप्रेक्टर केन्द्र र फिजियोथेरापीबाट तल लेखमा पढ्न सक्नुहुन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: - यो तपाइँ तनाव कुराकानीको बारेमा थाहा पाउनु पर्छ
लिंक नयाँ विन्डोमा खुल्छ।
Good. राम्रो दिन मा धेरै धेरै गर्दै
हामीलाई थाहा छ यो कस्तो छ, तर अझै हामी प्रायः उहि जालमा फस्दछौं - अर्थात् जब हामी अलि राम्रो महसुस हुन्छौं तब धेरै गनपाउडर जलाउनु पर्छ। पुरानो दुखाई निदानको साथ जो कोहीले चिन्न सक्छ कि यो अत्यन्तै स्वाभाविक स्वाभाविक हो जब पीडा अचानक थोरै हराउँदछ। तर हामी के गर्छौं? धेरै पाउडर बर्न गर्दै!
हाउसकीपिंग, काम वा सामाजिक जमघट - हामी एक थकित प्रवृत्ति छ नराम्रो अन्तस्करण लाई लिन दिनुहोस्। "मैले भर्खरै घर सफा गर्नु पर्छ" वा "गुन्डा र फ्राइड मलाई आज क्याफेमा भेट्न मन पराउँछन्" - त्यसैले हामी आफैंलाई यसमा फ्याँक्छौं। केवल समस्या यो छ कि ऊर्जा क्षमता प्रायः अस्थायी रूपमा सुधार गरिन्छ - र ब्याANG्ग त्यसपछि हामी धमाधम जान्छौं।
यो उर्जा क्षमता बढाउने एउटा तरिका बढी खाना खाएर र आफ्नै निदान अनुरूप हुन सक्छ। 'फाइब्रोमाइल्जिया आहार' ले राष्ट्रिय आहार सल्लाह र दिशानिर्देशहरू अनुसरण गर्दछ। तपाईं तल लेख मा यसको बारेमा अधिक पढ्न सक्नुहुन्छ।
The. मासिक धर्म चक्र र हार्मोनल परिवर्तनहरू
हर्मोनल परिवर्तनहरू प्राय: फिब्रोमायाल्जिया दुखाइ र लक्षणहरूको बढ्दो अवस्थासँग जोडिएको हुन्छ। एक नरम टिश्यु गठिया को लागी को लागी यो अतिरिक्त खराब हो किन पक्का छैन - तर यो शरीरको स्नायु प्रणाली मा अत्यधिक संवेदनशीलता संग जोडिएको छ।
एकले हार्मोनल परिवर्तनहरू द्वारा एक्जर्बिनेसन पनि अनुभव गर्न सक्दछ - यसैले देखेको जस्तो:
केहि अनुसन्धान अध्ययनहरूमा यो पनि उल्लेख गरिएको छ कि फाइब्रोमाइल्जियाको साथ हामीसँग प्राय: हार्मोन डोपामाइन र सेरोटोनिनको तल्लो तह हुन्छ। तसर्थ, एकले देख्न सक्दछ कि हर्मोनहरूले आज सम्मको नरम ऊतक संधिवातमा एक अपेक्षाकृत अज्ञात भूमिका खेल्दछ, जुन थप अनुसन्धान हुनुपर्दछ।
प्राकृतिक एंटी-इन्फ्लेमेटरी उपायहरू जान्नुले गठियालाई साँच्चै सहयोग गर्न सक्छ। तल तपाईं अझ बढी आठ प्राकृतिक विरोधी भड़काउने उपायहरू पढ्न सक्नुहुन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: - र्यूमेटिजमको विरूद्ध 8 प्राकृतिक एंटी-इन्फ्लेमेटरी उपायहरू
Ise. रोग र फाइब्रोमायाल्जिया
सामान्य रुघाखोकी र फ्लू जस्ता रोगले तपाईंको फाइब्रोमायल्जिया दुखाइलाई अझ खराब बनाउन सक्छ। यो किनभने सफ्ट टिश्यु र्युमेटोलोजिस्टहरूमा, शरीर र मस्तिष्कले लगातार दुखाइ संकेतहरू विनियमित र नियन्त्रण गर्न काम गर्दछ। - र त्यो अतिरिक्त कार्यहरू, जस्तै फ्लू भाइरस, एक ओभरलोड गर्न सक्छ।
जब हामीसँग शरीरमा अर्को रोग छ - नरम ऊतकको संधिवातल बाहेक - तब शरीरले यसको कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। नतिजा स्वरूप, फाइब्रोमायाल्जियालाई आंशिक रूपमा जाँचमा राख्न मद्दत गर्न कम संसाधनहरू छन्, र अचानक हामीलाई थाहा छ कि लक्षण र पीडाले उनीहरूको (बिग्रँदै) आगमनको घोषणा गरिरहेको छ।
हामी फाइब्रोमाइल्जियाका साथ शरीरका मांसपेशिहरू, जोर्नीहरू र नरम टिश्यूहरूमा क्लासिक फ्लू प्रभावसँग धेरै परिचित छौं - आखिर हामी प्रत्येक दिन यसैको साथ बाँचिरहेका छौं। तर त्यसपछि यो केहि संग थियो कि धेरै राज्यहरु एक अर्काको शीर्ष मा तह र एक अर्कालाई सुदृढ गर्न सक्छन्। यो ठीक नरम-टिशू गठियाले फ्लू कसरी हुन्छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: Ib प्रकारको फाइब्रोमाइल्जिया पेन [बिभिन्न प्रकारका पीडाका लागि उत्तम मार्गदर्शक]
दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र "नयाँ विन्डोमा खोल्नुहोस्" यदि तपाइँ पछि यो लेख पढ्न जारी राख्न चाहानुहुन्छ।
In. चोटपटक, आघात र अपरेसनहरू
Fibromyalgia ले नरम ऊतक र स्नायु प्रणालीमा अतिसंवेदनशीलता निम्त्याउँछ। ठ्याक्कै यसको कारणले गर्दा, बाह्य चोटपटक (अत्यधिक प्रयोग, घुँडा घुमाउने) वा शल्यक्रिया (उदाहरणका लागि, काँधको आर्थ्रोस्कोपी वा हिप प्रोस्थेसिस) तपाईंको लक्षणहरू बिग्रन सक्छ। तपाइँ यसलाई तपाइँको शरीरबाट अति प्रतिक्रियासँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ जुन दु: ख ट्रिगर गर्दछ।
अतिसंवेदनशीलताले परिणामस्वरूप हाम्रो मस्तिष्कमा दुखाई संकेत र संवेदी छापहरूको नियमनको अभाव हुन सक्छ। त्यसकारण हिप अपरेशन जस्ता ठूलो हस्तक्षेपले शल्यक्रियाको शल्यक्रियामा बनेको क्षति टिश्युको कारण छतमा पीडाको संकेत दिन सक्छ।
यसको मतलब यो हो कि भारी अपरेसन पछि पुन: प्राप्ति हुनुको साथसाथै हामी यो पनि ध्यानमा राख्दछौं कि यसले हाम्रो फाइब्रोमायाल्जिया दुखाईको ठूलो गम्भीर बिगार्न ट्रिगर गर्न सक्छ। राम्रो छैन! शारीरिक उपचार र विशिष्ट प्रशिक्षण शल्यक्रिया पछि यस्तो पीडा आक्रमण को संभावना कम गर्न को लागी महत्वपूर्ण हो।
यो पनि पढ्नुहोस्:7तरीका LDN Fibromyalgia विरुद्ध मद्दत गर्न सक्छ
थप जानकारी चाहनुहुन्छ? यो समूहमा शामिल हुनुहोस् र जानकारी साझा गर्नुहोस्!
नि: शुल्क स्वास्थ्य ज्ञान र व्यायामहरूको लागि हामीलाई YouTube मा अनुसरण गर्नुहोस्
सदस्यता लिन स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् हाम्रो च्यानलमा (यहाँ क्लिक गर्नुहोस्) - र दैनिक स्वास्थ्य सल्लाहहरू र व्यायाम कार्यक्रमहरूको लागि FB मा हाम्रो पृष्ठ अनुसरण गर्नुहोस्।
हामी ईमानदारीपूर्वक आशा गर्दछौं कि यस लेखले तपाईंलाई पुरानो दुखाइ विरुद्ध लड्न मद्दत गर्न सक्छ। यदि यो केहि चीज हो जुन तपाईं पनि भावुक हुनुहुन्छ भने, हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंले सोशल मिडियामा हाम्रो परिवारमा सामेल हुन र लेखलाई थप साझा गर्न छनौट गर्नुभयो।
दीर्घकालीन पीडाको लागि बढ्दो समझको लागि सोशल मिडियामा साझेदारी गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्
फेरि, हामी चाहन्छौं यस लेखलाई सोशल मिडियामा वा तपाईंको ब्लग मार्फत साझेदारी गर्न राम्रोसँग सोध्नुहोस्(कृपया लेखमा सिधा लिंक गर्नुहोस्)। समझ, सामान्य ज्ञान र बढेको फोकस दीर्घकालीन पीडा निदानको लागी राम्रो दैनिक जीवनको लागि पहिलो कदम हो।
कसरी तपाइँ पुरानो पीडासँग लड्न मद्दत गर्न को लागी सुझावहरू:
विकल्प A: सिधा एफबीमा साझेदारी गर्नुहोस् - वेबसाइट ठेगानाको प्रतिलिपि गर्नुहोस् र तपाईंको फेसबुक पृष्ठमा वा तपाईंको फेसबुक सदस्य समूहमा सम्बन्धित टाँस्नुहोस्। वा तल "SHARE" बटन थिच्नुहोस् तपाईंको फेसबुकमा पोष्ट साझा गर्नका लागि।
अगाडि साझेदारी गर्न यसलाई छुनुहोस्। एक ठूलो सबैलाई धन्यवाद जसले फाइब्रोमाइल्जियाको बढि समझलाई बढावा दिन योगदान गर्दछ।
हामी पुरानो दुखाइको लागि आधुनिक मूल्याङ्कन, उपचार र पुनर्वास प्रशिक्षण प्रदान गर्दछौं।
अर्को पृष्ठ: - फाइब्रोमायाल्जिया र बिहान पीडा [तपाईंलाई के थाहा हुनुपर्छ]
सङ्कुचन शोर (उदाहरण को लागी, कम्प्रेसन मोजे जसले घाउको मांसपेशिहरुमा रक्त संचार बढाउन योगदान गर्दछ)
(हामी २ messages--24 घण्टा भित्र सबै सन्देशहरू र प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रयास गर्दछौं)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/FIBROMYALGITRIGGERE.jpg?media=1648573622 368 700 भोंड्ट https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 भोंड्ट2019-03-10 12:52:402022-03-18 16:06:447 ज्ञात फिब्रोमायाल्जिया ट्रिगरहरू
म कसरी यो लेख सुरक्षित गर्न सक्छु ताकि म यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्दछु र यसलाई आफ्नो भउचरमा राख्न सक्छु, म यति चाँडो बिर्सन्छु र महत्त्वपूर्ण जानकारीको कागज प्रतिलिपिले मलाई ठूलो मद्दत पुर्‍याउँछ।
Fibromyalgia फ्लेयर-अपहरू र ट्रिगरहरू Ps सोरायसिस गठिया को लागी प्राकृतिक उपचार